ကက်သလစ် သီလရှင်တွေ ဘာကြောင့် ခေါင်းဆောင်း (veil) ဆောင်းသလဲ? | Radio Veritas Asia
ကက်သလစ် သီလရှင်တွေ ဘာကြောင့် ခေါင်းဆောင်း (veil) ဆောင်းသလဲ?
ကက်သလစ် သီလရှင်တွေရဲ့ ဦးခေါင်းမှာ ခေါင်းဆောင်း veil ဆောင်းတာကို မြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့ ခေါင်းဆောင်းတွေ ဆောင်းကြတာလဲ။ တကယ်တော့ အနောက် ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမူအရ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲတွေမှာ သတို့သမီးတွေ ခေါင်းဆောင်း (veil) ဆောင်းလေ့ရှိပြီး အိမ်ထောင် ရှိပြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အိမ်ထောင်ရှိပြီးကြောင်း အမှတ်လဏ္ခာအဖြစ် အပြင်သွားတဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းဆောင်း (veil) ကိုဆောင်းလေ့ရှိကြတယ်။
ကက်သလစ် သီလရှင်တွေ ခေါင်းဆောင်း (veil) ကိုဆောင်းတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
(၁) သခင်ယေဇူးရဲ့သတို့သမီး ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်လဏ္ခာ ဖြစ်တယ်။ ခေါင်းဆောင်းနဲ့ သီလရှင်ဝတ်ရုံ နှစးခုလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို ဘုရားသခင် အတွက် ဆက်ကပ်ထားတဲ့ အမှတ်အသား ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) သန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ ဘုရားသခင်အား ကက်သလစ်သီရှင်အဖြစ် (ဖြူစင်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းနှင့် နာခံခြင်း သစ္စာဆိုပြီး) မိမိတို့ရဲ့ဘ၀ကို ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းပြသခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆောင်းတွေနဲ့ အရောင်ကတော့ သီလရှင်များရဲ့အသင်းဂိုဏ်း (ကျင့်စဥ်၊ ဓလေ့) အပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ အများသောအားဖြင့် ...
(၁) White veil: သီလရှင်၀င်ခါစ အချိန်မှာ "veil of probation" အဖြူရောင် ခေါင်းဆောင်းပါတယ်။
(၂) Black veil: အနက်ရောင် ခေါင်းဆောင်း ကိုတော့ "veil of profession" သီလရှင်များ ပထမသစ္စာ religious vows ဆိုပြီး သီလရှင်များ ဆောင်းတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဘာသာရေး ဓလေ့ တစ်ခုရဲ့ ၀တ်ရုံဝတ်ဆင်ခြင်းက ခရစ်တော်၌ အသစ်သော ဘဝကို ရယူခြင်းကိုဆိုလိုပြီး လက်ခံသူဟာ “ ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်၏ ပုံသဏ္ဌန်တော် အတိုင်း အသိပညာ၌ အသစ်ပြုပြင်ထားသော လူသစ်ဘဝကို သင်တို့ ဆင်မြန်းထားကြလေပြီ။” (ကော်လောဆေ ၃း ၁၀)။ လို့ဆိုထားပါတယ်။
“Pope John Paul II in (his 1996 post-apostolic exhortation) Vita Consecrata (strongly recommended) that religious should wear their habit, that it should be visible..."
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါ် (၂)ကလည်း သူတော်စင် အသင်းဂိုဏ်းဝင် ကက်သလစ် သီလရှင်များ အနေနဲ့ အသင်းဂိုဏ်းရဲ့ ဓလေ့ဝတ်ရုံကို ဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ရဲ့ ဆက်ကပ်ရဲ့ အသက်တာ မြင်သာအောင် ပြုလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်း မိန့်ကြားခဲ့တယ်လို သိရပါတယ်။
ကဲ... စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကက်သလစ် မိန်းကလေး လူငယ်များအတွက် ဘယ်လိုမျိုး ခေါင်းဆောင်း၊ သီလရှင်ဝတ်ရုံ အရောင်နဲ့ ဘယ်အသင်းဂိုဏ်းကို ရွှေးမလဲ။
The veil isaheaddress worn by some orders of nuns or religious sisters. According to European tradition,amarried woman used to cover her hair when outside the house, so the nun's veil wasareflection of her status as the " Bride of Christ. " The veil is also used to emphasize sacredness and consecration. The color scheme can vary depending on the order. In many institutes,awhite veil is used as the "veil of probation " during novitiate, andadark veil, the " veil of profession, " is worn once religious vows are taken.
Photos credit to original post
"ဘာကြောင့် မေလကို စိတ်ပုတီးလလို့ သာသနာတော်က သတ်မှတ်ပေးထားတာလဲ?